Maxaa loola jeedaa deyn bixinta? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Dammaanadda Qalabka
Waa Maxay Deymanka Deynta?
Ereyga waxaa loo isticmaalaa meelo badan. a Dammaanadda Qalabka waa in la gudbiyo suuq-geynta iyo meelaynta suuqa raasumaalka. Intaas waxaa dheer, arrin lacag ah sida lacagta caddaanka ah waxaa loogu yeeraa bixinta bangiga.
Bixinta bilowga ah iyo saamiyada cusub ama suuqgeynta ayaa guud ahaan la sameeyaa iyada oo ku lug leh qaar ka mid ah hay'adaha deynta. Haddii uusan soo saaraha laftiisa iska leh hay'ad deyn ah. Machadyadu waxay isku mideeyaan in ay sameeyaan qandaraaska saldhiga. Badanaa heshiiska dejinta waxaa sidoo kale la qabtaa shirkad, qaar ka mid ah shirkadaha madaxabannaan. Maxay tahay ujeeddada arrintan? Marka hore iyo ugu horreyn, soo iibsiga raasumaalka. Ereyga Neuemission wuxuu la xidhiidhaa is-weydaarsi cusub. Shuruudaha waa in qiimaha saamiyada ay tahay in ay ka sarreeyaan qiimaha rasmiga ah. Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale jira arrimaha bulshada, tusaale ahaan, kharashka ku baxa dhammaan bangiyada cusub ee ay bixiso Bangiga Dhexe ee Federaalka. Deynka arrintan ayaa sidoo kale loo yaqaan "soo saar" ee goobo takhasus ah, oo loogu magac daray macnaha eray-bixinta.
Hawlaha iyo yoolalka
Shirkadaha waxay isku dayayaan in ay kordhiyaan raasamaalkooda ama raasumaalkooda amaahda oo ay ku xirantahay arin, taas oo u dhiganta deyn bixinta. this sinaanta waxaa lagu iibiyaa iyada oo loo marayo sarrifka saamiyada, arimaha saamiyada. Wadajirku wuxuu ciyaarayaa ciyaar.
Socdaalka suuqa saamiyada
IPO (Bixinta Dadweynaha ee bilowga ah), sarrifka saamiyada waxaa badanaa lagu magacaabaa saamiyada shirkadda si wada jir ah suuqa suuqyada. Ganacsiga dadweynaha ee ajaanibta waa arrin cusub. Shirkad kastaa, dabcan, sababo kala duwan oo ay u jecel yihiin inay ku siiyaan suuqa saamiyada. Sababta aadka muhiimka u ah ayaa ah suurtogalnimada in shirkad la siiyo cirbad dhaqaale. Tani waxay la mid tahay deyn bixinta shirkadda ay hesho.
Tusaalooyin macquul ah oo ku saabsan deyn bixinta
Sanadkan 2012 shirkadda Facebook waxay u aaday suuqa saamiyada. On 1. Bishii Febraayo, waxay ahayd markii ugu horeysay ee codsiga 18 la xareeyey iyo ku dhawaad ​​laba bilood kadib. May 2012, Facebook waxaa lagu soo dhaweeyay NASDAQ. Qiimaha saamiga ee saamiyada 38 ee qayb kasta wuxuu ahaa US Dollar. Waqti yar ka dib, dakhli sanadeedka 16 ayaa la soo sheegay. Natiijada, shirkadda Facebook ayaa kor u kacday illaa iyo xaddi lacageed oo ah US $ billion, taas oo ahayd deyn bixinta oo aad u sareeya. Maalmahan soo socda, si kastaba ha ahaatee, koorsadu waxay hoos ugu dhacday hoos-u-dhac, 104 Dollar. Sikastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, ayaa qiimo ku helay, illaa sanadka 18 u kordhay 2015 US dollar. Si wax loo fahmo waxoogaa la fahmi karo, waxaad ka heli doontaa fiidiyow, kaas oo bixiya macluumaad wax ku ool ah,
Qalabaynta buug-gacmeedka iyo qawaaniinta buugga
Waa hab lagu caawinayo sameynta deyn soo-saara. Waqtigan xaadirka ah waa noocyada ugu ballaadhan ee loo adeegsado, shirkadaha jecel in ay u adeegsadaan si ay u abuuraan qiimeeynta suuqgeynta. Dhammaan maal-galiyeyaasha danaynaya ayaa markaa ka dib sawirro u rogi kara BookRunner. Tani waxay dabcan ka dhici doontaa wakhti go'an oo qiimaha la rabo waa in lagu daraa. Buug-gacmeedkan waa qunsuliyada duurjoogta. Marxaladda soo socota, qiimaha suuqa suuqa waa la qeexi karaa, taas oo sidoo kale loo yaqaan marxaladda wareegitaanka.
Haddii ay jirto baahi weyn xilligan, oo ka sareysa dalabka, waxaa jira lacag deyn ah. Dalabkan dheeraadka ah ayaa markaa kadib la siiyaa si fudud oo loo yaqaan "Greenshoe".
Laakiin weli waxaa jira laba habab oo kale, qiimaha go'an iyo nidaamka xaraashka. Hase yeeshee, imika, qaabsocodka sicirka qiimaha go'an wax macno ah ma lahan.
Maqaalka horewaaxda daynta